7 Caado Oo Kor U Qaada Awooda Maskaxda - Daryeel Magazine
7 Caado Oo Kor U Qaada Awooda Maskaxda
In qofku uu dhiso quwaddiisa maskaxeed iyo garashadiisu waxa ay fure u noqon kartaa in uu ka guulaysto caqadaha iyo taakooyinka nolosha sidaas waxaa lagu sheegtay Amu Morin oo ah dhakhtar uku xeeldheer cilminafsigu mar ay dhowaan u warrantay shabakadda Moto times. Iyada oo tirisay dabeecado iyo tilmaamo ay sheegtay in inta badan laga dhoy la’ yahay oo cidda maalin kasta caadaysataa ay awoodayso in ay dhisto maskaxdeeda. Haddaba qodobbadaas ayaa waxaa ka mid ah toddoba caado oo ay Morin sheegtay in ay si fiican u caawiyaan awoodda maskaxeed ee qofka, una sahlaan in uu ka tallaabo caqadabaha iyo duruufaha taban eek a hor imanaya.
1. Naftaada u mahadnaq: Wax kasta oo kaa farxiya ka mahadnaq, xitaa haddii uu aad u yar yahay, waayo waxa uu kugu beerayaa shucuur ah in aad naftaada uga naxariisato hawsha badan ee ay maalintaas gashay, waxa aanay kugu caawinaysaa in aad hore u sii socoto.
2. Noloshu raaxo iyo xaglo laabni maleh: Naftaada ma’ horumarin kartid, kartidaada maskaxeedna ma dhisi kartid, haddii aanad diyaar u ahayn in aad ka tanaasusho qaybo ka mid ah raaxda nafta iyo kool-koolinta ay u baahan tahay. Hawl kasta la sugin xilli aad nafis tahay oo dareenkaagu xasiloon yahay. Nafta ku tababar in ay khudbad jeediso adiga oo aad u cadhaysan, ama jimicsi iyo ciyaar ku jira oo daallan. Waxaa kugu beermi in aad kalsooni ku qabto awooddaada iyo kartida kugu jirta maskax ahaan iyo jidh ahaanba, oo aad ku dhiirrato hawl iyo arrin aad marka hore u arkaysay in aanay dhici arin.
Akhriso: 12 calaamadood oo lagu garto dadka kartida badan
3. Naftaada si waqtii ay keli isku tahay: Si aad u wanaajiso awooddaada maskaxeed, ku dadaal in naftaada aad la gaar noqoto oo aad maalin kasta ugu yaraan 10 daqiiqo xasiliso adiga oo ka fogeynaya jadwalka ballamaha ah, shaqada joogtada ah, isticmaalka aaladaha casriga ah (Talefannada, kombiyuutarrada iwm). Waxa ay xeeldheerayaashu caddeeyeen in qofka oo fadhiista kelidii kadibna u fiirsada wax isaga oo aamusan ay ka caawiso in awooddiisa maskaxeed iyo garashadiisu ay koraan oo horumaraan.
4. Naftaada la dood: In naftaada aad gaar ula sheekaysato oo gartaada iyo dooddaada aad gaar u akhrisataa waxa ay door muhiim ah ka qaadataa hab-dhaqankaaga iyo sida aad arrimaha u eegayso ama u qiimaynayso. Naftaada oo aad la sheekaysataa waxa ay qofka ku beertaa kalsooni dheeraad ah, in adiga iyo nafta aad ka dhigto laba dhinac oo arrimaha muhiimka ah ka doodayaana waxa ay kalsooni kuu siinaysaa in marka aad dood iyo sheeko cid kale kula jirto aad kalsooni iyo hubsiimo ku gasho.
5. Xaqiijisi quwaddaada shakhsiga ah: In aad xidhato shaadhka dhibbanaha ama aad isla meeqaan dhigto ruux dhibbnaha ahi waxa ay dishaa awoodda maskaxeed ee qofka. Tusaale ahaan halkii aad ka odhan lahayd, “Maamulahayga shaqadu waxa uu iigu kallifaa in aan saacado dambe oo habeenkii ah shaqeeyo” waxaa ka habboon in aad tidhaahdo, “In habeenkii shaqada ku soo jeedi waayo ciqaab shaqo ayaan ku mutaysanayaa, laakiin de aniga ayuun baa go’aanka u dambeeya leh oo haddii aan rabo waa aan iskaga tegi karaaba”
Khubarada cilminafsigu waxa ay sheegayaan in qofka oo marka uu culays tirsanayo ku calaacala in uu dhibbane keliya yahay oo uu ku qasban yahay inuu sidaa yeelo, waxaa ka fiican in uu sheego xaqiiqada kale ee ah in dhibaato lagu hayo laakiin haddii uu rabo in uu ka baxana uu ka bixi karo. Arrintani waxa ay nafta ku beeraysaa waxoogaa kalsooni ah iyo in ay shaqada laga rabo si niyad ah u gudato, waxa aanay xoojinaysaa awoodda maskaxeed iyo niyad samaanta qofka. La soco…..
Qofka Oo Naftiisa La Sheekaysta Waxay Xoojisaa Awooda Xusuusta Maskaxda 10 Caado Oo Qofka Joogteeya Ka Caawiya Inuu Kasbado Qalbiyada Dadka Ku Xeeran & Bulshada Awooda iyo Saameynta erayada lagu hadlo Toddobada Caado ee ay Leeyihiin Dadka Waxtarka leh (The Seven Habits of Highly Effective People)